Fahafatesan’I Nelson Mandela : ‘Nandao Antsika Ny Vatany Fa Ny Fanahiny Kosa Haharitra Mandrakizay ‘ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2013 12:46 GMT
Nanao jeritodika ny fiainana sy ny lova navelan'i Nelson Mandela, ilay filoha Afrikana Tatsimo teo aloha sady modelin'ny fiadiana amin'ny fanavakavaham-bolon-koditra ny mponina maneran-tany hatramin'ny nahafatesany tamin'ny 5 Desambra 2013.
Ireto misy fanehoan-kevitra 6 avy amin'ny firenena maneran-tany :
Nosoratan'i Musa Okwonga, poeta sady mpanoratra monina any Londres, tao amin'ny bilaoginy fa alohan'ny zava-drehetra dia revolisionera ( mpitaky fiovana) izay niady tamin'ny tsy fahamarinana tao amin'ny fireneny i Mandela talohan'ny naha-mariky ny fandriam-pahalemana sy fampihavanana azy :
Ato anatin'ny andro vitsivitsy dia ho ezahinareo mafy ny hanao azy ho toy ny olona tsy izy akory, ary tsy ho vitanareo izany. Ezahinareo hampangiranina, ho diovina, halàna aminy ny maha-Malcom X azy [..] Lazainareo fa fitiavana fotsiny ihany i Mandela ary dia ezahinareo ampidirina ao anaty hira reggae malaza izy. “Ndeha hiara-hizotra, ary hiara-hiriaria.” [..] Eny e, ezaho araka izay vitanao, fa tsy hahomby ianao. Satria ao anatin'ny politika, ny firazanana, ny fahalalahana i Mandela, mbola ao amin'ny hery ihany koa izy, nataony izay tsapany fa tsy maintsy ataony ; ary raha jerena ny tsy fitoviana eo amin'ny lafiny toe-karena any Afrika Atsimo amin'izao fotoana, dia mety maty tamim-piheverana izy fa tsy mbola ampy ny efa vitany.
Naneho ny fanajana sy ny fisaorana azy noho ny lesom-piainana noraisiny tamin'i Mandela i Mialisoa, mpitoraka bilaogy any Antananarivo, Madagasikara, tao amin'ny lahatsoratra nosoratany: Bonne Route, Monsieur [fr] (Soava-dia Tompoko):
Any andro iray, tompoko, hipetraka eo anilan'ny zanako aho ary hamaky ny tantaranao amin'izy ireo. Any andro iray hipetraka eo akaikin'ny zanany ireo zanako ireo ary hamaky ny tantaranao aminy. Noho ianao dia mahalala aho, ary noho ianao dia mianatra aho :
Fantatro, momba an'iza no horesahana, rehefa tonga ny fotoana hanazavako amin'ny zanako hoe ahoana izany lehilahy mahery fo sy resy lahatra.
Fantatro ny fitsipi-piainana arahiko rehefa tonga ny fotoana hanabeazako ny ahy.
Fantatro ny havesa-danjan'ny fampihavanana. Amin'ny tenanao sy amin'ny manodidina anao.
Fantatro ny hasarobidin'ny famelan-keloka.
Fanatro ny hasarobidin'ny fitoviana.
Fanatro fa azo atao ny manatsara ny olona sy ny tena.
Fanatro ny tsara ateraky ny fanajàna, ny hafaliana, ary ny fahasahiana. […]
Fantatro, tompoko, fa tsy mahalala na dia kely aza aho. Fantatro tsara fa tsy mbola mahalala aho. Ka ny fahatsiarovana mendrika indrindra anao, tompoko, dia ny manohy mianatra ary mianatra mihetsika. Andriamanitra anie hanampy anay satria efa tonga ny fotoana hihetsehana. Misaotra, Tompoko. Soava dia.
Nampatsiahivin'i Toavina, mpanao fanadihadiana politika avy any Antananarivo, ao amin'ny Facebook ny andraikitr'i Madagasikara amin'ny fanohanana ny Kongresy Nasionaly Afrikanan'i Mandela (ANC), ilay hetsika nanohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra ary ankehitriny antoko eo amin'ny fitondrana any Afrika Atsimo :
Aza adino ry Malagasy malala fa nanampy ireo Mainty tao Afrika Atsimo i Madagasikara ! Namiantrano ny onja-peo ANC isika nandritra ny Repoblika Faharoa. Tonga teto Madagasikara niresaka ny momba an'i Afrika Atsimo tamin'ny Filoha teo aloha Ratsiraka ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Afrikana Tatsimo, Pik Botha. Efa teto Madagasikara ihany koa i De Klerk tamin'ny taona 90.
Tsy hitan'i Boukary Konaté, mpiara-miasa ao amin'ny Global Voices any Bamako izay ho lazaina nefa te-hahatsiaro io lehilahy io izy [fr]:
“Mandria am-piadanana,” fa tsy hitako izay ho lazaina. Tsy hitako izay lazaina satria tsy misy teny mahalaza ny tiako ambara. Hangina aho, hangina amin'ny fimonomononako anaty aho.
Mbola nampiany [fr]:
Reharehako ny fisian'ny làlana sy ny sekoly mitondra ny anaran'i Mandela aty Bamako, Mali. ‘Ndeha hiresadresaka haingana amin'ny Talen'ny Sekoly Mandela aho.
Inty ilay sekoly resahina :
Nanomboka ny maraina tamin'ny fitantarana ny momba ilay lehilahy tamin'ny mpianany ity mpampianatra ao amin'ny sekoly #Mandela #Mali pic.twitter.com/0gwSg5lrPg
— Boukary Konaté (@Fasokan) 6 Desambra 2013
Aminatou, mpikambana amin'ny mpiaro ny zon'ny vehivavy ao Niamey, Nizera dia nizara ity eritreritra [fr] momba an'i Mandela sy ny fanabeazana ity:
Loharanon-kevitra tsy mety ritra i Mandela. Miantefa tsara any an-tsofin'ny rehetra izay lazainy momba ny fanabeazana :
“Fitaovam-piadiana mahery vaika azo ampiasaina hanovàna ny tontolo ny fanabeazana.”
Archippe, Kamerone monina any Frantsa sady filohan'ny Internet Sans Frontières (aterineto tsy voafefy) dia nanindry lesona iray tokony ho tànan'ireo firenena Afrikana ao amin'ny Facebook-ny [fr]:
Nelson Mandela nous aura enseigné une chose essentielle à nous africains, à nous humains: on peut vaincre par les armes, le nombre, la rhétorique, mais la vraie victoire, celle qui marque les siècles, est celle de l'esprit enchanté. Le corps de mandela n'est plus, son esprit est éternel.
Nampianatra antsika zava-dehibe manan-danja, ho isika Afrikana, ho antsika olombelona i Nelson Mandela : afaka mandresy amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana, ny isa, ny fahaiza-miteny isika, fa ny tena fandresena dia izay mamela marika amin'ny taona an-jatonjatony maro, dia izay an'ny fanahy. Nandao antsika i Mandela fa ny fanahiny kosa hitoetra mandrakizay.
Nisy mpitarika Alzeriana iray naneho hevitra momba ny fiantraikan'ny “fomban'i Mandela ” tamin'ny fampihavanana nataony ary tokony atao any Alzeria, tamin'i Alexandre Adler, mpitoraka bilaogy mpanao politika frantsay malaza :
Taona vitsy lasa izay, nisy mpitarika Alzeriana iray nilaza fa ny “fomban'i Mandela” tamin'ny fampihavanana no tsara kokoa ho an'i Alzeria tamin'ny 1962 noho ny fandehanan'ny Eoropeana sy ny Jiosy tao anatin'ny herintaona latsaka. “Nefa,” hoy ihany izy “tsy nananatsika intsony ny hevitr'i Mandela tamin'izany fotoana izany, ary tena ilaintsika izany amin'izao fotoana izao.”